१४ जना संग बिहे गर्ने यी युवतीले सुहागरातमा यस्तो अचम्म गर्थिन…थाहा पाएर पर्नुहुन्छ चकित – PathivaraOnline
Home > समाचार > १४ जना संग बिहे गर्ने यी युवतीले सुहागरातमा यस्तो अचम्म गर्थिन…थाहा पाएर पर्नुहुन्छ चकित
१४ जना संग बिहे गर्ने यी युवतीले सुहागरातमा यस्तो अचम्म गर्थिन…थाहा पाएर पर्नुहुन्छ चकित
admin March 9, 2019 समाचार 0
युवतीले १–२ होइन् पुरै १४ पटक विहे गरेको अनौठो खबर प्राप्त भएको छ । घटना भारतको राजस्थान राज्य अन्तर्गत पर्ने कोटा भन्ने ठाउँको हो । जहाँ बन्दना नाम गरेकी एक युवतीले रेकर्ड तोड्दै १४ वटा विहे गरेकी हुन् ।उनलाई १४ वटै श्रीमानले आफ्नो घरमा पनि भित्र्याए । तर, सुहागरातमा भने बेहुलाले नसोचेको भइदियो । १४ वटा श्रीमानमध्ये एउटाले पनि बन्दनासँग सुहागरात मनाउन पाएनन् ।
उल्टै लाखौंको धनमाल गुमाए । खासमा सुहागरातमा बहाना बनाएर बन्दना १४ वटै श्रीमानका घरका सम्पूर्ण गरगहना र नगद पैसा लुटेर फरार हुन्थिन् । विहेको नाटक गरेर धनसम्पत्ति लुट्ने बन्दनाको यो धन्दा नै रहेछ जसमा अन्य युवती र महिलाहरुले उनलाई साथ दिएका थिए ।
अन्य महिलाहरुले सेटिङ मिलाउने र बन्दनाले विहे गरेर सुहागरातमा बहाना बनाएर लुट्ने लज्जास्पद कर्तुतको पर्दाफास प्रहरीले धेरैपछि गरेको छ । यसको पर्दाफास बन्दनाका लागि शेटिङ मिलाउने महिला पक्राउ परेपछि भयो । समाचार अनुसार प्रहरीले विभिन्न सहरका पाँच महिलालाई पक्रेको छ ।
यो अपराधमा मुख्य भुमिका निर्वाह गर्दै आएकी बन्दना भने फरार छिन् । १४ जनामध्येका एक कैलाशलाई यसरी लुटियो प्रहरीका अनुसार यो गिरोहको सिकार बनेका पीडित कैलाशले भनेका छन् की टाढाका नातेदार हजारीलालले उनलाई सम्पर्क गरेर सुन्दर र सुशील युवतीसँग विहे गरिदिने वाचा गरे । त्यो बेला कैलाश विहे गर्न केटी खोजिरहेका थिए ।
त्यसपछि उनलाई हजारीले एक गेष्ट हाउसमा बोलाए जहाँ ८ युवतीहरु र एक महिला थिइन् । बन्दना नाम भएकी युवतीसँग उनको विहे करिब डेढ लाख रुपैयाँमा तय भयो ।
सबै कुरा तय भएपछि उक्त गिरोहले माला र सिन्दुर मगाएर त्यही विहेको प्रक्रिया पुरा गरिदिए । त्यसपछि सुहागरातको मौका पारेर बन्दनाले बहाना बनाएर कैलाशलाई त्यो रात आफूबाट टाढा राखिन् ।
विहान जब कैलाश निन्द्राबाट ब्युझिए तब बन्दना गायब थिइन् र पछि थाहा भयो कि बन्दना उनले दिएको सुनचाँदीका गरगहना र पैसा लिएर फरार भएकी रहिछन्।-दैनिक नेपालमा समाचार छ ।
भर्खरै मलेसियाबाट आयो नेपाली कामदारको यस्तो सबैलाई रुवाउने खबर – पुरा हेरी शेयर गरौ !
शिशिरलाई अँगालो हाल्दै म मर्दैछु, मेरो छोराछोरी हेरिदिनुस् भन्दै किन रोए यी व्यक्ति ? (भिडियो)
सुनियोजित हार बिर्सदै नेतृ भगवती चौधरी गृह जिल्ला पुग्दा जनतामा यस्तो उल्लास!, भन्छन्–‘भगवतीका लागि मर्न पनि तयार छौं’
हेर्दाहेर्दै आँखाकै अगाडी मेरो साथीलाई फेवातालले डुबायो, रुँदै साथी भन्छन्,‘फर्किएर आउँदैनन् भनेर नभनिदिनुस् न’ (भिडियो सहित)
दु’खद खबर : हेलिकोप्टर दुर्घ’टनामा दुई सैनिकको मृ’त्यु